Tag: ka qeyb qaadashada bulshada | Martech Zone
Tag: hawlgelinta bulshada
39% ganacsiyada ma raadraacaan ololahooda bulsheed waxayna u horseedaysaa fursado la seegay. Waxaan ku tusi doonaa sida si hufan loola socdo hashtags inta lagu jiro dhacdooyinka, iyo habab aad u isticmaali karto si aad u dhisto olole ballaadhan. Waxaan diiradda saari doonaa laba arrimood: Qiyaasaha muhiimka ah ee ay tahay inaad u diyaar garowdo inaad cabirto marka aad ololeynayso hashtag Xeelado fudud oo aad u adeegsan karto si aad u abuurto ballaadhin ballaaran Marinka Ololaha Bulsho ee Muhiimka ah Inta badan ololayaasha bulshada ayaa loo qaabeeyey
Isla marka aan arko ka soo horjeedka loo adeegsaday cinwaanka maqaal ku saabsan suuqgeynta, waxaan helayaa waxoogaa yareyn ah. Xogtan hoose ee ka socota Devesh Design waxay qabataa shaqo weyn oo ah in la muujiyo baahida loo qabo macaamiisha inay u adeegsadaan emayl shirkadooda. Shaki iigama jiro sida awoodda emaylka waana awood ahaan tikniyoolajiyad suuqgeyn riix ah si loogu dhiirrigaliyo macaamiisha inay tallaabo qaadaan. Way shaqaysaa… qof walbana waa inuu noqdaa
Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Axad, Sebtembar 21, 2014 Douglas Karr
Hordhaca bogga 'infographic infografia' waa mid wanaagsan oo xun, laakiin ma ogi inay arrintu ku dhacday ciddiyaha madaxa. Faa'iidooyinka (wanaagsan) dhammaantood waa tirakoob aad u sax ah oo taageeraya dadaallada suuqgeynta warbaahinta bulshada, laakiin qasaarooyinka ayaa ka hadlaya farqiga u dhexeeya fahamka, istiraatiijiyadda iyo falanqaynta in ka badan suuqgeynta dhexdhexaadinta. Aynu mid mid u qaadanno. 50% C-Suite kuma qanacsana qiimaha baraha bulshada. Tani waxay noqon kartaa arrimo dhowr ah.
Waqtigan xaadirka ah dhammaan xirfadleyda suuqgeyntu waxay ogyihiin in furaha kaqeybgalka bulsho kasta oo bulsheed ay tahay wadaagida waxyaabaha qiimaha u leh iyaga Dabcan, sidoo kale waa muhiim in lagu xoojiyo waxyaabahaas sawirro waaweyn iyo in lala wadaago waqtiga ugu habboon si loo gaaro dhagaystayaasha ugu wanaagsan. Pagemodo nama siinin kaliya habdhaqanka iyo istaraatiijiyadaha ugu wanaagsan ee aan kula wadaagi karno waxyaabaha ku jira Facebook, waxay kaloo bixiyaan barxad lagu dhajiyo waxyaabahaas - Pagemodo Posts. Iyadoo Pagemodo
Sida suuq geyn badan iyo iibin, isku xirka dhibcaha mararka qaar way adagtahay inta udhaxeysa dhaqdhaqaaqa macaamiisha ay qaataan iyo barta dhabta ah ee wax iibsashada Shaki kuma jiro, in kastoo, inuu jiro isku xirnaan udhaxeysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo dhaqanka wax iibsiga. CMOs waxay bilaabeen inay bartaan cilmi baaris inay jirto sabab sidoo kale stuff waxyaabo xiise leh! Faahfaahintan ka socota SocialAnnex, oo ah barxad suuqgeyn ah oo loogu talagalay suuq-geynta warbaahinta bulshada, ayaa bixisa natiijooyin muhiim ah. Macluumaadka macaamilka ee waxtarka leh, ha ahaato mid horseedaya, tirada dadka, dareenka, macaamilka